Thwebula UltraSurf 16.03 – Vessoft
UltraSurf – a isofthiwe for engaziwa ukuphequlula amawebhusayithi ku inthanethi. Izici eziyinhloko isofthiwe zihlanganisa: cookies ukuhlanza kanye nomlando sites wavakashela, izilungiselelo proxy, fihla-ikheli IP, indawo indawo njll UltraSurf ngokuphepha encrypts idatha yakho, ukuvimbela abantu okungagunyaziwe ukubuka ulwazi. Isofthiwe likuvumela angayinaki le ukucwaninga inthanethi futhi kukunikeza ukufinyelela kumawebhusayithi ivinjiwe. UltraSurf futhi usebenza yezinkampani ehlukahlukene idatha, okwenza Ukuhlala of abasebenzisi kufihlwe internet kunoma PC.
Igama on the internet
Ukuvikelwa idatha ngocansi
Amazwana on UltraSurf:
UltraSurf Ahlobene software:
English, Українська, Français, Español... KeePass 2.30 Professional futhi Portable; 1.29 Portable futhi Classic
Amafayela Isofthiwe ekuhlukaniseni amafayela zibe izingxenye futhi uhlanganyele nabo kwalokho. Isofthiwe isekela amafayela ezinobukhulu obuhlukahlukene nezakhiwo.